I-RapLeaf ifumana njani idatha? Banokuyisebenzisa Njani Abarhwebi?
Sebenzisa idatha ngokukhawuleza ngeRapLeaf
NgoLwesithathu, Meyi 30, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
"Yazi umthengi wakho" yinto ehlonitshwayo yexesha lokuphumelela kwihlabathi lentengiso. Uninzi lwabathengisi luqokelela iidilesi ze-imeyile, kodwa baswele idatha eyongezelelweyo enokukunceda unxibelelane ngcono nabo babhalisile. I-Rapleaf kunceda ufunde okungakumbi malunga nabathengi bakho. Banikezela ngedatha yeedemografi kunye nendlela yokuphila (ubudala, isini, imeko yomtshato, umvuzo, njl., Cofa apha ukubona konke) kwiidilesi zabathengi ze-imeyile zase-US.
Ngaba kufanelekile ukuchitha iindleko nomgudu? Impendulo emfutshane nguewe. Kwisifundo semicimbi yemihla ngemihla, ukwahlulwahlulwa kunye nokwenza ngokwezifiso kukhokelele kwezi ziphumo zilandelayo:
Ukwanda ngama-30% kuwo omabini amaxabiso avulekileyo kunye nokucofa usebenzisa imigca yesifundo ekujoliswe kuso kunye nomxholo.
Ukunyuka nge-14% kumvuzo ngamnye kumsebenzisi omtsha ngaphezulu kweentsuku ezingama-30.
Ukuhla kwe-63% kwiindleko kuguqulo ngalunye ngaphezulu kweqela lolawulo.
Isinye kwisithathu ixesha ukufikelela kwimbuyekezo eqikelelweyo kutyalo-mali kusetyenziswa ukujolisa kwezesini.
Sebenzisa iRapleaf kulula. Ngenisa uluhlu lwe-imeyile njengefayile yokubhaliweyo okanye ispredishithi, ukufumana ubudala, isini, imeko yomtshato, umvuzo wekhaya, umsebenzi, imfundo kunye nolunye ulwazi olunzulu. Inkampani ibanga ukuba inolwazi ngeipesenti ezingama-70 zazo zonke iidilesi ezisebenzayo ze-imeyile eMelika. Baqinisekisa amaxabiso omdlalo angaphezulu kwama-90% kwaye bathengisa iirekhodi kwisiqingatha sepeni irekhodi ngalinye.
Ngaba kusemthethweni? Ewe. Amaqabane eRapleaf kunye neenkampani ezininzi zedatha (ezinkulu nezincinci) ukudibanisa idatha kwaye ziyibophelele kwiidilesi ze-imeyile. Bona yifumane kuphela kwiziko ledatha elisemthethweni ababambelela kuyo yonke imigaqo yabucala yabathengi -imithombo enika abathengi isaziso esifanelekileyo kunye nokukhetha malunga nokwabelana ngolwazi lwabo. Bona zabo FAQ Ngolwazi olongezelelweyo.
Ukufikelela kulwazi olulungiselelwe wena kwimeko yexesha lokwenyani kuvumela umthengisi ukuba abonelele ngokuchanekileyo ngokufunwa ngumthengi, okanye athumele ii-imeyile ezinentsingiselo nezichanekileyo kunokuba agqithe ngokungaboni. Olu lwazi lukhanyisa iinkangeleko zabathengi babo abathembekileyo, ebavumela ukuba balungelelanise imikhankaso yabo yokuthengisa kubhabho.
tags: thenga idatha ye-imeyileemailidilesi yemeyileidatha ye-imeyileukuphuculwa kwe-imeyilengqangqa
Ukuziphatha okuShukumayo ekuhlaleni
Iindlela ezi-3 zoShishino zilwa noMnxeba